नेप्से झन्झन् घट्दै, २० अंंकले घटेपछि ६४ करोड ९८ लाको सेयर कारोवार (तालिका–सहित)
कसले कमायो–कसले गुमायो ?
काठमाडौं, ५ असार । नेप्से झन्झन् घट्दै गएको छ । अघिल्लो दिन १३ अंकले घटेको नेप्से साताको दोस्रो कारोवार दिन आज सोमबार पनि २० दसमलव ८२ अंकले घटेर १५ सय ५५ दसमलव १५ अंकमा कायम रहेको छ । नेप्से सेन्सिटिभ पनि आज चार दसमलव ४९ अंंकले घटेर तीन सय ३० दसमलव ३७ अंकमा कायम रहेको छ ।
एक सय ३७ कम्पनीहरुको पाँच हजार आठ सय १२ वटा कारोवारमा आठ लाख १४ हजार चार सय ५३ कित्ता सेयर खरिद बिक्री हुंदा कारोवार रकम ६४ करोड ९८ लाख आठ हजार तीन सय १५ रुपैयाँ पुुगेको छ । आठ वटा समुहको कारोवार भएकोमा आठ वटै समुहको कारोवार घटेपछि नेप्से पुरै रातो भएको छ ।
उच्च अंकले घटेको बीमा समुहको सुचक एक सय ४२ दसमलव ८९ अंकले घटेर आठ हजार दुुई सय २० दसमलव आठ अंकमा कायम रहेकोमा २९ करोड ६४ लाख १० हजार रुपैयाँको कारोवार भएको छ । बाँणिज्य बैंक समुहको सुचक २० दसमलव ३८ अंकले घटेर १३ सय ८५ दसमलव ५१ अंकमा कायम रहेकोमा २१ करोड ६७ लाख आठ हजार रुपैयाँको कारोवार भएको छ ।
यसैगरी होटल समुहको सुचक १६ दसमलव ६२ अंकले घटेर २१ सय ८८ दसमलव ९८ अंकमा कायम रहेकोमा ३९ लाख २६ हजार पाँच सय ५० रुपैयाँको कारोवार भएको छ । बिकास बैंक समुहको सुचक २१ दसमलव ३१ अंकले घटेर १९ सय १२ दसमलव १८ अंकमा कायम रहेकोमा छ करोड ३२ लाख ९८ हजार चार सय रुपैयाँको कारोवार भएको छ ।
जलबिद्युुत, फाईनान्स, उत्पादनमुुलक र अन्य समुहको सुचक पनि आज घटेको छ । आज बढी कमाउने कम्पनीको सुचीमा तारागाउँ रेजिडेन्सी होटल परेको छ भने बढी गुुमाउने कम्पनीको सुचीमा एभरेष्ट बैंकको कन्र्भटेवल प्रिफरेन्सको सेयर परेको छ । रकम कारोवारका आधारमा भने आज एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी अग्रस्थानमा परेको छ ।
१ तारागाउँ रेजिडेन्सी होटल २६५ ३.११
२ कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक ३०६ २
३ फरवार्ड कम्युनिटी डे. बैंक १४४७ १.९७
४ आईसीएफसी फाईनान्स २९६ १.७२
५ अरुण फाईनान्स १९६ १.५५
१ एभरेष्ट बैंक (कन्र्भटेवल प्रिफरेन्स) १०४५ ९.४४
२ मिथिला लघुबित्त बिकास बैंक १३३० ५.९०
३ तिनाउ बिकास बैंक ३०३ ५.३१
४ बोटर्लस नेपाल तराई ६१०१ ५.२९
५ सिन्धुु बिकास बैंक ३५१ ४.९५
१ एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी १५६०९८६८ २९३०
२ एभरेष्ट बैंक ५९३९०४७५ १६६५
३ प्राईम लाईफ इन्स्योरेन्स ३०७५८११३ २५४९
४ स्टान्र्डड चार्टड बैंक २५७४७२९३ २२६०
५ लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स १७१९७८५८ १७६५
जनरल ईन्स्योरेन्स नेपालद्धारा कारोवार शुभारम्भ
महालक्ष्मीको तोरीको तेल बजारमा
नेप्से अब कहिले बढ्छ सरकार ? आज पनि नेप्से आठ दसमलव ३४ अंकले घट्यो (तालिका सहित)
कुमारी बैंकद्धारा ‘साथ–हकुना मटाट’ लाई सहयोग
देवः विकास बैंकको वार्षिक साधारण सभा, यस्तो छ प्रस्ताव
वाणिज्य बैंकको मर्जरमा जोड, गृहकार्यमा जुटे बैंक